Ahụhụ iku ume
Katidral na-atọ ụtọ
Ọkpụkpụ mmiri ọwa mmiri silicone
Ejiri silicone 100% nke ahụike, Enweghị mgbakasị ahụ 、 enweghị nfụkasị, Dị mma maka itinye oge dị ogologo, ahịrị nyocha X-ray site na katuetị, Agba-koodu maka ọhụhụ nha, use jiri naanị ya, CE 、 ISO13485 asambodo
Ihu mkpuchi nke Face
Igwe imi na-agbazi agbaze
Ejikọtara ya na igwe eji anesthesia na ikuku na-eku ume iji dobe ọwa ume ume ma ọ bụ oxygen nke ndị ọrịa ịwa ahụ.
Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd., onye enyemaka nke naanị ya bụ Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd, bụ ọkachamara na-ahụ maka ọgwụ.
Asambodo ISO13485 + CE, RoHS wee ruo asambodo ikike ị nweta ihe nrụrụ 15
Ahụmahụ bara ụba
Afọ 10 nke ahụmahụ injinịa usoro
Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe omumu ihe nhicha nke 100000, na-arụ ọrụ nke ọma na njikwa sistemu nke ngwaọrụ ahụike (ISO13485)
Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd nke enyemaka nke naanị Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd, bụ ọkachamara na-ahụ maka ọgwụ. Site na nyocha ngwaahịa ndị ọkachamara na ahụike, mmepe na mmepụta, anyị na-enye ngwaahịa ngwaọrụ ịgwọ ọrịa a pụrụ ịdabere na ya, nke dị nchebe ma dị mma. Companylọ ọrụ ahụ nwere ngwa mmepụta na akụrụngwa nnwale, teknụzụ mmepụta dị elu, yana njikwa dị elu, teknụzụ na ndị ọrụ mmepụta.
Tinye adreesị email gị iji nweta ihe ọhụụ Metal newsand.